ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်သက်သာ...
1 มิ.ย. 2562 - 20:11 น.
မတ်လ ၃၁ ရက် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ပါဝင်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ တပ်မတော်အရာရှိ ၄ ဦးနဲ့စစ်သည် ၃ ဦးတို့ဟာ သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမိန့်နဲ့ လွတ်မြောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ပြစ်ဒဏ် သက်သာခွင့် ပေးလိုက်တဲ့အတွက် လွတ်မြောက်သွားကြတာလို့ အစိုးရဘက်က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။
အင်းဒင်ရွာ လူသတ်မှုကို နိုင်ငံတကာကလည်း ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ကြ
အင်းဒင် လူသတ်မှု ဖြစ်စဉ်မှာ တပ်မတော်သား ၇ ဦးအပြင် ရဲတပ်သားတစ်ဦး လည်း ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်နဲ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသလို ကျောင်းဆရာ တစ်ဦးကိုလည်း ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံဖို့အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြစ်မှုတွေအတွက် တပ်မတော်တရားရုံးက တရားစီရင်ခွင့် ရှိသလို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုတွေမှာလည်း ရဲတရားရုံးက တရားစီရင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
အင်းဒင်ကျေးရွာလူသတ်မှု ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံးလွတ်မြောက် သွားပေမယ့် လူသတ်မှုမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂ နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ကျခံခဲ့ရသူ ကျောင်းဆရာ ဦးအေးထွန်းကတော့ ထောင်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်သက်သာခွင့်နဲ့ အင်းဒင်လူသတ်မှုက တပ်မတော်သားတွေလွတ်ခဲ့